यौ-न स-म्पर्कपछि तुरुन्तै पिसाब फेर्न किन आवश्यक छ ? महिलाहरूले जान्नै पर्ने बिशेष कुरा - Samaj Patra
आफ्नो पार्टनरसँग शा’रीरिक स’म्बन्ध निर्माण गर्दा आफ्नो घनिष्ठ सरसफाइको ख्याल गर्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यदि तपाईंले घनिष्ठ सरसफाइमा ध्यान दिनुभएन भने, तपाईंले धेरै समस्याहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
शा’रीरिक स’म्बन्ध राख्नु स्वास्थ्यका लागि स्वस्थ्य मानिन्छ । तर त्यस पछि गरिएका केही गल्तीले तपाईको स्वास्थ्यलाई हानि पुर्‍याउन सक्छ। धेरै मानिसहरु यौनसम्पर्क गरेपछि तुरुन्तै सुत्छन् । जुन तपाईको लागि निकै हानिकारक साबित हुन सक्छ ।
यौ’नस’म्प’र्कपछि पिसाब फेर्नु निकै जरुरी हुन्छ । यस्तो अवस्थामा आउनुस् यसको पछाडिको कारण के हो थाहा पाउनुहोस् । आउनुहोस् हामी तपाईलाई बताउँछौँ कि यौ’नस’म्प’र्कपछि पिसाब पास गर्नु किन आवश्यक हुन्छ ।
त्यसपछि पिसाब किन जानुपर्छ ?
महिलाको पिसाब नली सानो हुने भएकाले स’म्प’र्कपछि पिसाब फेर्नु महिलाका लागि निकै महत्वपूर्ण हुन्छ, जसले ब्याक्टेरिया सजिलै फैलाउन रोक्छ । पिसाव फेर्नुभएन भने चाही ब्याक्टेरिया सजिलै फैलाउने छ । स’म्प’र्कका क्रममा पुरुषको पिसाबमा हुने ब्याक्टेरिया सजिलै महिलाको गोप्य भागमा प्रवेश गर्छ । यस्तो अवस्थामा सम्प’र्क’को तुरुन्तै पिसाब गर्नाले यी ब्याक्टेरियालाई हटाउन सकिन्छ ।
युरिन इन्फेक्सन हुने खतरा हुन्छ
धेरै महिलाले स’म्प’र्कपछि युरिन इन्फेक्सनको समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने यौनसम्पर्क गर्दा महिलाको पिसाब नलीमा ब्याक्टेरिया फैलिन्छ । जसले यो समस्या निम्त्याउँछ । यो कारणले गर्दा पुरुषको तुलनामा महिलालाई युटिआई हुने सम्भावना बढी हुन्छ। महिलाहरूमा, मूत्रमार्ग (पिसाब बाहिर जाने नली) पुरुषहरूको तुलनामा धेरै छोटो हुन्छ। जसका कारण ब्याक्टेरिया सजिलै तपाईको मूत्रमार्गमा प्रवेश गर्छ । यसका लागि स’म्प’र्कपछि तुरुन्तै प्राइभेट पार्टलाई राम्ररी सफा गर्नु जरुरी छ ।
स’म्प’र्कपछि कहिले पिसाब पास गर्नुपर्छ ?
स’म्पर्क गरेको ३० मिनेट भित्र पिसाब निकाल्ने प्रयास गर्नुहोस्। यदि तपाइँ लामो समय पर्खनुभयो भने, ब्याक्टेरिया सजिलै तपाइँको मूत्रमार्गमा प्रवेश गर्न सक्छ। यसका लागि पिसाब फेर्नेसँगै प्राइभेट पार्ट पनि सफा गर्नुपर्छ । के पुरुषले स’म्प’र्क गरेपछि पिसाब फेर्नुपर्छ ?
यदि पुरुषले स’म्प’र्कपछि पिसाब फेर्दैनन् भने यसले उनीहरुलाई कुनै हानी गर्दैन । पुरुषको मूत्रमार्ग महिलाको तुलनामा लामो हुने भएकाले यौ’नस’म्पर्कपछि संक्रमणको जोखिम नगण्य हुन्छ ।
के स’म्पर्क’पछि पिसाब गर्दा गर्भ रहन सक्दैन ?
यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि यौ-नस-म्पर्कपछि पिसाब पास गर्नाले गर्भधारण हुनबाट बच्न सक्छ, तपाइँ गलत हुनुहुन्छ। यदि तपाईं गर्भावस्थाबाट बच्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले सुरक्षित यौ’नस’म्पर्कको बाटो रोज्नुपर्छ। तर यदि तपाइँ गर्भावस्थाको योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने, हामी तपाइँलाई बताउन चाहन्छौं कि यौ’नस’म्पर्क’पछि पिसाब गर्दा तपाइँको गर्भावस्थालाई असर गर्दैन।
गर्भावस्थाको लागि, शुक्राणु नीजि अंगबाट फलोपियन ट्यूबमा यात्रा गर्न आवश्यक छ। नीजि अंग मूत्रमार्गबाट ​​अलग हुन्छ, त्यसैले यौ’नस’म्प’र्कपछि पिसाब फेर्दा तपाईंको गर्भावस्थामा असर पर्दैन।
यौ’नस’म्पर्क’पछि पिसाब जाँदा पोल्ने हुन्छ ?
सम्पर्क पछि, धेरै महिलाहरूले पिसाब जाँदा पोलेको महसुस गर्छन्। यसको मतलब तपाईलाई युरिन इन्फेक्सन भएको होइन । पिसाब जाँदा पोल्नु लक्षण कहिलेकाहीँ युटीआई सँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ। तर यो एक वा दुई दिनमा आफैंमा राम्रो हुन्छ। तर यौ’न’सम्पर्क गरेको २ दिनपछि पनि पिसाब गर्दा पोलेको महसुस भएमा डाक्टरसँग परामर्श लिनुहोस्।
Previous Article तालि र गाली दुवै पाएपछी दुर्गेश थापाले खोले सबै कुरा, लेखे यति लामो स्टाटस
Next Article कम्मरको भागमा बाँधेर कालो कपडाको थैलीभित्र लुकाएर सुनको ब्रासलेट ल्याएका सप्तरीका ३६ वर्षीय सौकातलाई विमानस्थलबाट पक्राउ गरियो